Sida loo soo dejinta Xiriirada ka iPhone si Mac & nidaameed Xiriirada ka Mac si iPhone
Sida loo soo dejinta Xiriirada ka iPhone si Mac iyo Sida loo dar Xiriirada inay iPhone on Mac
Ma suurogalbaa in dajiyaan xiriirada ka iPhone 5 si aan kitaabkayga cinwaanka Mac? - Ellen
Waxaan soo iibsaday Mac ah, sida aan ku wareejin karo xiriirada ka 4s iPhone aan inaan cusub Mac Pro? - David
Sidee baan syncing xiriirada ka Mac si iPhone, tan iyo markii ay jirto tab Info ee Lugood mar dambe. Thanks! - Claire
Waxa ay u muuqataa in dad badan oo isticmaala iPhone aadan aqoon sida loo soo dhoofsadaan xiriirada ka iPhone si Mac. (Eeg sida ay u dajiyaan xiriirada ka iPhone in PC daaqadaha ) Dhab ahaantii, waxaa jira siyaabo dhawr ah oo qiimo leh. Waxaad isticmaali kartaa iCloud ama qalabka dhinac saddexaad si loo badbaadiyo xiriirada ka iPhone si Mac. Sida sida ay ku darto xiriirada ka Mac si iPhone, waxaad isku dayi kartaa iCloud ama adeegyo kale oo daruur ku gaadhsiin kara hadafkaaga. Wixii macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah, fadlan akhri on:
Qaybta 1. Sida loo soo dejinta Xiriirada ka iPhone si Mac
Qaybta 2. Sida loo hagaagsan Xiriirada ka Mac si iPhone
Sida aan kor ku soo sheegnay, waxaa jira siyaabo dhowr ah oo la heli karo si dhoofin xiriirada ka iPhone si Mac. Fiiri faahfaahinta hab kasta oo hoos
si toos ah uga iPhone
ka kaabta Lugood
Bedelka Xiriirada ka iPhone si Mac via iCloud
iCould hadda waa adeeg default in Apple waxay bixisaa in aad u hagaagsan xiriirada ka iPhone si Mac ah. Waa kuwan tallaabooyinku sida ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone si Mac via iCloud. Marka hore, xiriiriyaan iPhone la Wi-Fi.
Tallaabada 1. sahlo Xiriirada iCloud
On aad iPhone, tuubada Settings > tagaan si ay iCloud . Saxiix in la ID Apple aad. Haddii aadan hore u yeelan mid weli, fadlan sameyso akoon ah. Raadi Xiriirada doorasho halkan iyo tirtiri badhanka ee Xiriirada in ON (markii button cagaar noqdo).
Tallaabada 2. Transfer Xiriirada ka iPhone si Mac
Waxaa jira laba meelood oo aad u si loo badbaadiyo iPhone xiriirada si Mac, Xiriirada (buug Address) ama file vCard ee drive maxalliga ah ee Mac ah.
# 1. Save iPhone xiriirada kitaab Cinwaanka Mac, haddii aad qotomisay iCloud on your computer, laga yaabo inaad la Wadaajiyeen buug Cinwaanka aad la iCloud. Xaaladdan oo kale, waxaad eegi kartaa buug Addess si aad u aragtid haddii xiriirada iPhone yihiin kitaabkii Cinwaanka ama aan. Haddii aadan awood u aad iCloud on Mac, waa in aad marka hore ka taagay. Riix inankeeda icon yar bidixda sare ee Mac iyo dooran rabtid System . Raadi iCloud iyo double-riix si aad u furto. Saxiix in la ID Apple aad. Riix ah Xiriirada (buug Address) iyo adeegyo kale oo aad jeceshahay in aad awood. Ka dib markaas, waxaad arki kartaa in dhammaan xiriirada iPhone aad wareejiyo aad Mac
# 2. Save iPhone xiriirada si Mac sida file vCard ah: fur web browser ku saabsan Mac iyo furi iCloud.com. Markaas saxiixa in la ID Apple aad. Riix Xiriirada icon. Riix icon goobaha bidix ee hoose dooro dhoofinta vCard .
Sida loo badbaadi Xiriirada ka iPhone si toos ah Mac
Dadka qaar ayaa ka cabanaya inaysan ma jecla in ay isticmaalaan iCloud si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone si Mac sababo ammaanka. Ok, kiiskan, laga yaabo inaad jeceshahay xiriirada ka iPhone badbaadiyo inay Mac si toos ah. Kuwa soo socda waa tallaabooyinka loogu sida loo sameeyo.
Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) . Waa software ka caawin doona in aad badbaadin xiriirada ka iPhone si Mac si toos ah. Waxaa Orod aad Mac iyo xiriiriyaan iPhone aad Mac via cable USB iPhone. Riix soo kabsado Device macruufka .
Next, haddii aad iPhone waa iPhone 4 ama 3GS, waa inaad:
Haddii aad isticmaasho iPhone 5 ama iPhone 4s, riix Start button uu furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 2. Start in baarista iPhone
Markii barnaamijka bilaabmin aad ka baareyso iPhone, waxa ay noqon doontaa sida ay muujinayso si dhekhso ah.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo wareejiyo iPhone xiriirada si Mac
Waxaad ka arki kartaa Xiriirada ka iPhone galeeysid bidix. Waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xiriirada in lagu helay on your iPhone sawirka kadib. Dooro Xiriirada iyo hubi mid liiska mid ka mid ah, markaas u lahaataan kuwa aad rabto oo guji Ladnaansho . Markaas waa waxyaalahaas oo dhan xiriirada iPhone badbaadi doontaa Mac si toos ah.
Import Xiriirada ka iPhone si Mac via kaabta Lugood
Dadka qaar ayaa ka codsaday yahay waxaa suurtagal ah in la soo dhoofsadaan xiriirada ka iPhone gurmad file (gurmad Lugood) tan iyo xiriirada waxaa lagu xoojiyaa in faylka. Xaqiiqdu waxay tahay in Apple marnaba kuu ogolaanaya in aad si aad u hubiso ka soo files hal gurmad Lugood ee file haddii aadan soo celin aad iPhone la. Nasiib wanaag, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) Macdan iPhone xiriirada ka Lugood gurmad file.
Tallaabada 1. Download Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac)
Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) on your Mac. Waxay u ordaan oo ay doortaan in ay ka soo kabsadaan Lugood gurmad File. Waxay muujin doonaa Lugood oo dhan files gurmad. Haddii ay jiraan wax ka badan hal files raad raac ah oo aad iPhone, dooro mid ka mid ah taariikhda dhowaan, oo guji Scan Macdan kooban file gurmad ah.
Tallaabada 2. conacts Save iPhone si Mac Cinwaanka Book
Marka scan ka baxayo, halkan aad ku eegaan karo waxyaabaha oo dhan xiriirada iPhone aad. Hubi xiriirada hubinta box iyo guji Ladnaansho si loo badbaadiyo xiriirada iPhone aad ku Mac ah. Markaas, Kitaabka Cinwaanka furan iyo xiriirrada badbaadiyey soo gudbin on your Mac. Dooro dhamaan xiriirrada .vcf oo wada jiidin buug cinwaanka. Ok. Waxaad si guul leh loo wareejiyay xiriirada ka iPhone si Mac Cinwaanka Book.
Habka ugu sahlan in ay u hagaagsan xiriirada ka Mac si iPhone waa in la isticmaalayo iCloud. Oo hab default Apple waxay bixisaa si ay u gudbiyaan xiriirada ka Mac si iPhone. Haddii aadan sida ay u isticmaalaya iCloud, si aad u iPhone gali kartaa adiga oo xiriir si Gmail xiriir hore oo suuqa kala iibsiga ka Gmail ka dib aad Mac. Si kastaba, aynu eegno sida ay u isticmaalaan iCloud si hagaagsan xiriirada ka Mac si iPhone.
Tallaabada 1. Setup iCloud on Mac
Riix icon inankeeda bidixda sare ee Mac dooro rabtid System . Raadi iyo furan iCloud. Saxiix in la ID Apple aad. Check Xiriirada (buug Address) iyo adeegyo kale oo aad jeceshahay in aad awood wareejinta ku iCloud.
Tallaabada 2. Transfer Xiriirada ka iPhone si Mac via iCloud
Connect aad iPhone la Wi-Fi. Tubada Settings > tagaan si ay iCloud aad iPhone. Saxiix in la ID Apple aad. Ha ogolaan in button Xiriirada in ay ON.
Songs Copy u dhaxaysa iPhone iyo Mac
Photos ka iPhone dhaqaaq Mac
Bedelka iPhone Video inay Mac
Nuqul playlist ka iPhone in Lugood
Music nidaameed Lugood si iPhone
Hab fudud u hagaagsan iPhone la Mac
Kaabta iPhone aan Lugood on Mac
Bedelka iPhone Appps Back to Lugood
> Resource > iPhone > Sida loo soo dejinta Xiriirada ka iPhone si Mac